Zụta Bitcoin na Naịjirịa ozugbo na nchebe | Paxful
Zụta ma Ree Bitcoin (BTC) na Nigeria
Chebe ego gị site na Naira na ada-ada ma chebe ego gị na Bitcoin. Zụrụ Bitcoin na nhọrọ ịkwụ ụgwọ ọ bụla gụnyere Kaadị Onyinye Amazon, Kaadị Onyinye iTunes na nnyefe Ụlọakụ!
Erela ihe karịrị 1000 Bitcoin na Nigeria!
Lelee nkuzi anyị otu esi azuta Bitcoin mfe
Ozugbo—Enwere ike ịchọ ID
Pịa ebe a iji hụ nhọrọ niile
N'elu 300 usoro ọkwụkwụụgwọ
Gbalịa ụzọ ọzọ ịkwụ ụgwọ
300 usoro ọkwụkwụụgwọ
1. Họrọ ụzọ ịkwụ ụgwọ site n'aka ekpe
1. Họrọ ụzọ ịkwụ ụgwọ site n'elu
Họrọ n'ime usoro ọkwụkwụụgwọ kacha elu na Nigeria. Ma ọ bụ chọta usoro ọkwụkwụụgwọ ọ bụla ọzọ site na nhọrọ n'okpuru usoro kachasị elu.
2. Pịnye ego gị n'ime
Ọnụahaịa na Naira
I ga enweta na Bitcoin
Ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa atukwasiriobi
Ị nwere ike ịzụta Bitcoin n'ọtụtụ ụzọ
Zụta Bitcoin Iji Kaadị Onyinye
Soro ntuziaka ndị a
1. Gaa jiri ego zụta kaadị onyinye sitere na ụlọahịa dị na mpaghara dị ka Blessings Computer ma ọ bụ Konga.com.
2. Họrọ usoro ịkwụ ụgwọ dị n'elu wee pịnye ego ole ị nwere na kaadị wee pịa "Zụta Bitcoin ugbu a". Windo ohuu ga-emepe nwere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa Paxful (ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasi nma).
3. Gụọ site na iwu banyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ma bido ịzụ ahịa. Bulite foto nke azụ kaadị ahụe kpochapụrụ na akwụkwọ akwụmụgwọ. Jide n'aka na ị ga ebu ụzọ rụọ ọrụ kaadị ahụ! Pịa bọtịnụ "agbasoro m ntuziaka" ma chere ka ha hapụ Bitcoin.
Jiri Kaadị onyinye zụta
Jiri Nyefee Ụlọakụ National Bank zụta Bitcoin
1. Họrọ Nyefee Ụlọakụ National Bank ma pịnye na ọnụọgụgụ ị ga emefu n'elu. Oree ga enyere gị aka itinye ego na akpa ego Paxful Bitcoin.
2. Soro ntuziaka ha iji nyefee ego site na akaụntụ uloakụ gị ga n'aka òreè. ENWEGHỊ ỊKWỤ ỤGWỌ IJI QUICK TELLER, ENWEGHỊ EGO NYEFEE IJI ATM.
3. Ozugbo enyefere ya, Pịa bọtịnụ "E sorola m ntuziaka" ma chere ka ha hapụ Bitcoin.
4. Bitcoin ga dị ozugbo na akpa ego Paxful gị ma enwere ike iziga ya ebe ọ bụla n'ụwa ozugbo.
Jiri nyefee ụlọakụ zụta Bitcoin
Jiri Western Union / MoneyGram zụta
1. Họrọ Western Union ma ọ bụ MoneyGram ma pịnye na ọnụọgụgụ ị ga emefu n’elu. Òreè ga enyere gị aka itinye ego na akpa ego Paxful Bitcoin.
2. Soro ntuziaka ha iji nyefee ego. Enwere ike nchere ogologo oge site na Western Union mana òreè Paxful enweghị igbu oge.
Jiri Western Union zụta
Nyere ndị Naijiria aka inweta Bitcoin ma inwere ike inweta uru dị ukwuu rue 60%na ahịaobula Bido iji akaụntụ ụlọakụ Naijiria ere ihe ugbu a, lee ntuziaka anyị n’efu. Paxful na enweta ndị ahịa Bitcoin ruru 1000 si Naịjirịa kwa ụbọchị
Imaara ọtụtụ ndị chọrọ ịzụ Bitcoin na Naịjirịa? Site na Obere ụlọahịa Bitcoin na programụ Onye Mmekọ ị na enweta 2% na azụmaahịa ọ bụla ruo mgbe ebighi ebi site na ịkekọrịta njikọ. Bido ugbu a.
Gịnị kpatara Bitcoin?
Bitcoin bụ akụ dijitalụ na usoro ọkwụkwụụgwọ, Paxful na eme ka ọ dị mfe ịtụgharị kaadị onyinye gị n'ime Bitcoin ma puo na Bitcoin. Bitcoin abụrụla ihe bara uru na ụwa dijitalụ anyị. Ị nwere ike iche banyere ya dịka ọla edo ntanetị. Dị ka ọla edo, ọnụego Bitcoin na-aga n'ihu na ọ na atụ anya ịhụ ka ọ na eto na ọnụego Bitcoin, ọkachasị mgbe oge akụ na ụba na emebi emebi.
Mgbe ị natara Bitcoin ị nwere ike ịme ihe ọ bụla masịrị gị. Ị nwere nhọrọ ijide ha na àkpa ego gị, ree Bitcoin maka dollar US ma ọ bụ ego ọ bụla ọzọ. I nwekwara ike izipu Bitcoin gị na àkpa ego ọ bụla.
Ebee ka ị ga esi na emefu Bitcoin?
Ị hụ nnukwu ndepụta nke ndị ahịa ńa anabata Bitcoin gaa na https://spendabit.co/merchants.
Mefuo Bitcoin site na mmasị gị
Gba chaa chaa - BitCasino
Elektrọnik - NewEgg
Tụgharịa Bitcoin huo ego na Bitcoin ATM dị gị nso - Maapụ ATM Bitcoin
Bitcoin na akụkọ
Ebe ọdọahịa Bitcoin ohuru na elekwasị anya na Nigeria
Ịzụta na ire Bitcoin mere ka ọ dị mfe site na Paxful
Nnukwu ụlọ ọrụ na anabata Bitcoin